Usoro Na Olee otú iji gbochie nzaghachi spam Site gị Google Analytics - Ndụmọdụ Semalt
Ruo afọ ole na ole, ntinye akwụkwọ ntinye aka na ebe nrụọrụ weebụ abụwo nsogbu dị mkpa. Ntuziaka isi okwu Spammy nwere ike ime ka ị chee na e nwewo ọtụtụ nleta na akaụntụ Google Analytics n'ihi na ị na-ezipụ na ozi ntanetị na mgbasa ozi.
Ntugharị spam dịka darodar, bọtịnụ maka weebụsaịtị, na bọtịnụ òkè dị mfe bụ n'ime search engine ngwaọrụ kachasị mma nke na-emebi ihe arụ ọrụ weebụsaịtị. Nchịkọta Google bụ otu n'ime ihe ndị dị mkpa na-enyere ndị ụlọ ọrụ na ndị na-azụ ahịa azụmahịa e-azụmahịa aka ịtụle na soro ala ụzọ ndị ọbịa ha na-eso.
Nke a bụ ole na ole aghụghọ Max Bell kọwara, onye ahịa Ahịa Gbasara Ọkachamara , nke ga - enyere gị aka igbochi spam spam site na emetụta arụmọrụ gị.
Iji - creatine fiyat.htaccess File
Ịkwado okporo ụzọ ntinye akwụkwọ spam na-arụ ọrụ nke ọma site na .htaccess. A na-eji faịlụ nhazi ahụ mee ihe iji na-agba ọsọ gị. Usoro na egbochi gị na ebe nrụọrụ weebụ site na overloading na blocks Ntuziaka spams ngalaba site na gị na saịtị. Ịkwụsị nzagharị spam site na .htaccess dị irè ebe ọ bụ na a pụghị ịkụzi faịlụ ahụ iji gbochie nleta spammy site na ngalaba ma ọ bụ adreesị IP.
Ọtụtụ ahịa ahịa na ndị nwe ụlọ ọrụ na-ahọrọ na iji .htaccess igbochi spam ntinye aka site na imetụta arụmọrụ nke azụmahịa ha. Nke a hypertext ohere ọ bụghị naanị nkanka ewepu Ntuziaka spam na website spiders gị GA ma na-egbochi obi na ngalaba site sava ha.
Inye ụdị iwu ziri ezi mgbe ị na-ewepu na igbochi spam na-ezigara ka ị zere ịlafu ozi dị mkpa banyere ebe nrụọrụ weebụ gị. Ị maara na ọnụọgụ abụọ nwere agwa mgbe ịme iwu ikikere nwere ike ịdalata gị B2B azụmahịa Tupu ị igbochi spam Ntuziaka site na iji iwu ozugbo, tụlee ịjụ onye mmepụta weebụ ma ọ bụ budata ngwa ngwa WordPress.
Ụfọdụ ajụjụ na-ebili ịchọ nkọwa banyere ọdịiche dị n'etiti ígwè ọrụ robots na faịlụ .htaccess. Dị ka ndị na-emepụta ebe nrụọrụ weebụ , faịlụ robots na-arụ ọrụ n'inyere bọọlụ search engine na weebụ spiders ịkwọ ụgbọala gaa na ebe nrụọrụ weebụ ebe .htaccess na-enyere ndị ahịa n'ahịa aka ịtọọ iwu ka ha gbochie spam ozi, ọtụtụ adreesị IP, na okporo ụzọ na-adịghị mma.
Nwepụta nke GA nzacha na ntinye aka spam
Ọ bụrụ na ị na-egbochi spam ntinye aka na akaụntụ Google Analytics, nchịkọta Analytics Google na-atụ aro. Ndị nzacha na-eme ka ndị na-ere ahịa n'Ịntanet na ndị na-emepe weebụ nyochaa data na akụkọ na Google Analytics. Dị ka marketer, ị nwere ike iji GA iji wepụ ọrụ esịtidem nke sitere na ebe ọrụ gị, na-egbochi spam na-ezigara ya, ma na-achịkwa ọtụtụ adreesị IP na ngalaba obi site na ebe nrụọrụ weebụ gị.
Ị nwere ike iji Google Analytics nzacha iji wepu obi ngalaba na darodar gị na saịtị. Nke a bụ ihe ole na ole iji mee ya.
Malite akaụntụ GA na abanye.
Pịa 'Ntọala Ntọala' akara ma họrọ 'All Filters'.
Mepụta nhazi ọhụrụ ma wepụta aha ọhụrụ nke ị ga - echeta ngwa ngwa.
Pịa bọtịnụ 'Filter Types' ma họrọ 'Predefined Filter'.
Pịa ma pịa 'Ewepu,' 'adreesị IP' na 'akara' na akara ndị dị na akaụntụ Google Analytics gị.
Jupụta na adreesị IP ka ewepu ya, wee pịa 'Save.'
Mgbe ị na-ewepu adreesị IP na spam ozi ntinye site na akaụntụ Google Analytics gị, ọ dị mma ịchọta na ihe nzacha adịghị arụ ọrụ na akụkọ ndị gara aga. Iji mezuo nsonaazụ na ịrụ ọrụ ọma, tụlee igbochi ngalaba spammy jiri ma Google Analytics na faịlụ .htaccess. Unu echere ruo mgbe spammy ngalaba bufee ihe nkesa gị. Wụnye nchịkọta Google na ebe nrụọrụ weebụ gị ma gbochie spam ozi ntụgharị, webspiders, okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè, na okporo ụlọ.